Global Voices teny Malagasy » Global Voices Advocacy no nandresy tamin’ny fifaninanana bilaogy Zemanta · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Febroary 2019 7:34 GMT 1	 · Mpanoratra Solana Larsen Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Global Voices Advocacy  no nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana Blogging for a Cause  an'ny Zemanta. Tranonkala isan-karazany maherin'ny 60 no voatendry, ary samy nahazo 1200 dolara ny dimy voalohany nahazo vato betsaka indrindra. Misaotra tamin'ny fanohanana rehetra!!
Ireo efatra hafa nandresy dia Goods for Good , iSurvive , Wokai , Yoga Bear .
Raha tsy fantatrao, ny Global Voices Advocacy  dia tetikasan'ny Global Voices  mba hanangana tambajotram-bilaogera sy mpikatroka antserasera miady amin'ny sivana manerantany. Sami ben Gharbia , bilaogera Toniziana sady mpiaro ny fahalalaham-pitenena no taleny.
Zemanta  dia bilaogy vaovao mahafinaritra sady fampiharana media sosialy azonao trohana toy ny itatry ny Firefox. Mandeha ao amin'ny Gmail ihany koa izy!
Tao amin'ny Sacred Beginnings , nanoratra ny bilaogera iray mitondra ny anarana hoe Moonstar Silverwolf:
Aparna Ray nanome ny vatony amin'ny maha-iray amin'i Newsmerick  azy:
Ao amin'ny bilaogy Media Re:Public , Persephone Miel nanoratra hoe:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/04/134624/
 hanao fanomezana, : https://globalvoicesonline.org/donate